SIDA LOO KARIYO HADHUUDH SI AY U TAHAY JILICSAN, CASIIR LEH OO DHADHAN FIICAN LEH: XULASHADA KOOLLADA KALA DUWAN EE CALAFKA AH EE AAN NOQON LAHEYN QALALAN IYO GOOYN, IYO SIDOO KALE SIDA CUNTADA - KHUDRADDA
Corn waa cuntad aad u fiican oo caafimaad leh, oo loo adeegsado karinta.
Waa la keydiyaa, la kariyey, la shiilay, subag ayaa laga sameeyey, lowskuna waa la kariyaa, oo loo isticmaalo inuu sameeyo shukulaatada iyo doofaarka.
Caanaha siriyaalkani waxaa lagu sharaxay ma aha oo kaliya qaabka ay u isticmaalaan, laakiin sidoo kale dhadhankiisa gaarka ah iyo korontada.
Isticmaalka badeecadani waxay saameyn ku leedahay jirka oo dhan, waxayna buuxineysaa sahayda waxyaabo badan oo muhiim ah. Qayb ka mid ah, hadhuudhku wuxuu ka kooban yahay:
Vitamin E - Antioxidant, tones, waxay kicisaa nidaamka difaaca, waxay kor u qaaddaa geeddi-socodka dib-u-dhiska.
Nicotinic acid PP - wuxuu ka qaybqaataa dheef-shiid kiimikaadka, wuxuu yareynayaa heerka sonkorta, wuxuu nadiifiyaa xididdada dhiigga, oo ay weheliyaan fitamiinada A iyo B waxay xoojisaa nidaamka dareemayaasha waxayna taageertaa codka guud ee jirka.
Acids - Waxay gacan ka geystaan ​​xeer-dejinta kolestaroolka dhiigga.
potassium, fosfooraska - xoojiya lafaha, la dagaallanka hurdo la'aan;
magnesium - wuxuu dejiyaa nidaamka dareemayaasha, waxay hagaajinaysaa dheefshiidka;
sodium ayaa loo baahan yahay hababka dareemayaasha iyo murqaha;
birta, zinc, manganese - ka caawiya koritaanka iyo difaaca dabiiciga ah ee jirka, ka hortagga cudurada wadajir ah.
Isticmaalka joogtada ah ee badeecadani waxay keeni kartaa faa'iidooyin badan dhalinyarada da'da yar iyo kuwa bislaaba. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad karti u yeelato oo aad karisid.
Si aad u kariso, waa inaad doorataa dhagaha yar yar ee midab huruud ah oo leh miro jilicsan. Hubi baqda ah ee hadhuudhku waa mid sahlan. Isagoo jejebinaya hadhuudh, waxay u baahan tahay in laga saaro faraha. Haddii ay tahay mid casri ah, jilicsan, ka dibna koolladu waxay ku haboon tahay karinta. Xakameyn, miro qallalan oo leh dhirbaaxo ayaa tilmaamaya in hadhuudhku aad u sarreeyo. Waxa kale oo la karin karaa, laakiin waxay qaadan doontaa waqti dheer, iyo dhadhanka ayaa si weyn u kala duwan.
Waa in la xusuustaa in ay wanaagsan tahay in aan la qaadin hadhuudhkii dalagga, haddii kale dhadhanka ayaa laga yaabaa inay niyad jabaan. Sidoo kale, markaad dooranayso inaad taxadarto caleemaha.
MUHIIM! Haddii aysan jirin caleemo on cob ah, inta badan badiyaa taasi waxay muujinaysaa daaweyn dheeraad ah ee khudradda leh cayayaanka. Cunista cuntooyinkaas oo kale waxay halis u tahay caafimaadka.
Feker ahaan waxay noqon laheyd dhegta cagaarka ku xiga ee cagaaran, oo aan laga helin stigmas. Calaamad muujinaysa daaqsinka ayaa noqon doona caleemo huruud ah oo ka imanaysa rugta.
Caleenta caajis la'aanta ah iyo la'aanta nacnacnaanta ee miro waxay muujinaysaa in geerida la jeexay wakhti dheer waxayna bilaabantey in la qalajiyo, taas oo macnaheedu yahay dhadhankiisa iyo fayadhowrka ayaa si xun u xanuunsaday.
Meelaha timirta waa in aan loo dhigin kaydinta muddada dheer. Waxay si dhakhso ah u lumiyaan hantidooda, yaraynayaan, adkaadeen, kallana. Sidaa darteed, si dhakhso ah ayaa loo diyaariyey. Sidoo kale, markaad dooranayso, waa inaad isku daydaa inaad soo qaadato kabaha isla heerka qaangaarka ah iyo qiyaasta isku mid ah, markaa hadhuudhku waa la kariyaa si siman.
Ka hor inta karinta waa lagama maarmaan in la nadiifiyo jeexa caleemaha iyo dharka.
Qayb ka mid ah caleemaha ayaa lagu ridi karaa xagga hoose ee digsiga, sidaas darteed hadhuudhku wuu dhadhamin doonaa si fiicanna ma dhegi doono xagga hoose.
Haddii ay jiraan dufan dusha sare, waxay u baahan yihiin in la gooyo, cobs ballaaran oo la gooyo badh.
Ka dib markaa, hadhuudhka waa in lagu qooyay ilaa hal saac oo biyo qabow, kadibna si fiican u biyo raaci biyo. Waxaad sameyn kartaa adigoo aanad engegin, haddii dheguhu ay yaryihiin (caano).
Sida loo kariyo, si ay u ahayd jilicsan, casiir leh oo dhadhan fiican leh? Waxaa jira xeerar guud oo loogu talagalay in lagu kariyo hadhuudhka ku dhex jira shooladda. Si ay u sameeyaan casiir leh, dhadhan fiican leh oo jilicsan, waxaa had iyo jeer la gelin biyo karkaraya. Heerka diyaargarowga waxaa lagu go'aamin karaa dhadhan, adoo kala qaybinaya hadhuudhka.
Intee in la kariyo, sidee ayay u jilicsanayd? Mawduucyada yar yar waa la kariyaa, aan ka badnayn nus saac, baaluqa - saacad, da'da - aan ka yarayn laba saacadood (waxaanu u sheegnay sida loo doorto oo loo kariyo hadhuudhka saxda ah ee saxda ah, iyo maqaalkani waxaad baran doontaa sida iyo sida badan loo kariyo iyo khudradda cagaaran).
MUHIIM! Isku-dalliga daloolka marka uu cunto karinayo waa lagama maarmaan shan daqiiqo ka hor intaan la diyaarin Haddii aad horey u sameysid, miro-dhajintu way adkaan doontaa, luminta khalkhalka.
Digsiga biyo karkaraya, hoos u dhig dharka dhaqda la dhaqay iyo diirran, sug ilaa inta ay kor u kacayaan, yareeyaan dabka xooggan illaa dhexdhexaad ah, kariyo 5-10 daqiiqo.
Kadibna ka qaad biyaha, cusbada oo ku saydhaa sabdo dhalaalaya.
In badan oo ku saabsan sida iyo sidee cunto ugu karsan kareyska caanaha, akhriya maqaalkan.
Peel oo dhaq caleen, ha iska tuurin caleemaha.
Ku qooji cobs biyo qabow ugu yaraan saacad.
Ku rid caleemo qulqulaya biyo karkarin, karkarin, hoos u dhig tuubooyinka, sug mar kale karkarinta, iska diiri dabka iyo kari 40-50 daqiiqo, dabool dabool.
Ka dib markaa, ku dar milix qaar, ku dar caleemaha haray oo isku kari waayo 5-10 daqiiqadood oo kale.
Si aad u hesho hadhuudh la dhammeeyey, qalaji, xilli subagga leh oo ku dar milix ay u dhadhamaan.
Faahfaahin ku saabsan sida hadhuudhku u samaysan yahay si aad u dhadhan fiican leh, akhri waxyaabahan.
Rabshadaha loogu talagalay kuleyliyaha laba-geeska ah
hadhuudhka ku yaalla rugta;
Cobs for steamers waa in la doortaa dhalinyarada, la gooyaa qaybo siman oo la dhigo hal heer si ay si siman u diyaarsan.
Weelka wax lagu kariyo ee saliidda ah leh subagga ama saliidda cuntada.
Waqtiga karinta 30-40 daqiiqo.
Dhalaali 15 gram oo subag ah oo khafiif ah, ku dar 50 garaam oo ah walxo la jajabiyey, koofiyado.
Geli hadhuudh saxan, xilli jiil ah maraqa lowska, u adeeg si gooni gooni ah.
Baro cunnooyin dheeraad ah oo loogu talagalay wax lagu kariyo hadhuudh khafiif ah oo halkan ku yaal.
Fiiri fiidiyoow sida loo sameeyo hadhuudhkan.
Nidaam karinta oo aad u fudud oo dhakhso ah loogu talagalay cobs.
Ha daaweynin iyaga saacad, ku rid bac caag ah, ku dar 2 qaado oo biyo ah.
Xidh xirmooyinka si adag, u samee 2-3 godaad si aad u oggolaato hawo u socodka oo u soo dir microwave 10-15 daqiiqo.
Nadiifi hargaha dhamaystiran, dufan leh subagga dhalaalay, cusbo.
Si aad u ogaatid sida loo kariyo hadhuudhka microwave ee baakada si dhakhso leh, akhri halkan, iyo qodobkan waxaad ka heli doontaa cuntada ugu fiican ee lagu kariyo khudaarta mashiinka microwave.
Corn without cobs
Kala saar hadhuudhka, si fiican u raaci, ku rid baaquli, ku shub biyo.
Karso daboolka illaa 30 daqiiqo.
Ka dibna ku dar qiyaas yar oo cagaaran, dill iyo subagga, karkari 10 daqiiqo oo kale.
Si loo sameeyo dhadhan fiican leh oo aan la gubin, digsiga waa in la doortaa hoos hoos. Cuntadani waa mid sahlan.
Digirta hadhuudhka - 2 xabbo;
saliid gabbaldayaha - 20 ml;
cusbo - 1/4 hl.
Raaci cobs, nadiif, jarjar qaybaha, shiil kuleyl dhexdhexaad ah saliid gabbaldayaha dhinac kasta shan daqiiqo.
Ka dibna ku dar 50 ml oo biyo ah, yareeyso kuleylka oo kari dabool aan lahayn dabool illaa biyaha biyuhu ka baxaan.
Saliida subagga, qaso cusbo oo ku dhaji hadhuudh la diyaariyey.
MUHIIM! Kaliya hadhuudh yar ayaa ku haboon in lagu kariyo digsi, miro baaluq ah ayaa aad u adag.
Waxaad u baahan doontaa haan qoto dheer, saldhig u ah waxaad u baahan tahay dufan leh subag.
Ka dibna u dhig khudaarta diirran oo si fiican loo dhaqo.
Ku shub biyo kulul ilaa dhexe ee saxanka iyo daboolo foorno.
Fadhi ku soo dir foornada, oo lagu shubay ilaa 180-200 digrii 30 daqiiqo.
Baro cunnooyin badan oo loogu talagalay karinta hadhuudka foornada halkan.
Sidee loo kaydiyaa diyaar?
Ku kaydi hadhuudhkii ugu wanaagsanaa ee ku yaal rugta. Habka ugu fudud wuxuu noqon karaa inuu ku duubo isbuunyo kasta oo leh foorno dhoobo oo ku rid qaboojiyaha. Ereyga kaydinta noocan oo kale ah waa yar yahay, qiyaastii saddex maalmood. Inta lagu jiro wakhtigan, badeecada ayaa ku filan kuleylka microwave, dhammaan caafimaadka iyo dhadhanka ayaa sii ahaan doona.
Si loo kariyo hadhuudhkii dheeraa ee la ilaaliyey, waxay u baahan tahay salting yar. Salt waa dabiici ah dabiici ah oo kaa caawin doona ilaalinta tayada alaabta.
Si habsami ah Si aad hadhuudhka u ilaaliso muddo dheer, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho qaboojiyaha. Dheg walbana waa in si adag loogu duubaa filim fiiqan oo lagu rakibay qaboojiyaha barafka leh. Sidaa darteed, badeecada waxaa lagu kaydin karaa illaa hal sano.
Si aad u jabiso dhegta waxaad u baahan tahay inaad ka beddesho qaboojiyaha ilaa qaboojiyaha iyo sug intaad doonto. Isticmaalka microwave kiiskan laguma talin. Bannaanka saxda ah ayaa kuu ogolaanaya inaad badbaadiso ma aha oo kaliya dhadhanka, laakiin sidoo kale dhamaan sifooyinka wanaagsan ee hadhuudhka.
MUHIIM! Si looga hortago abuuritaanka baraf dheeraad ah inta lagu jiro barafka, ka dib marka la karinayo baahida khaaska ah waxaa loo baahan yahay in dib loogu celiyo colander oo loo oggolaado in la daadiyo.
Diyaarinta hadhuudhka, iyo sidoo kale kaydinta, uma baahna xirfado gaar ah. La socoshada talooyinka sahlan ee ka shaqaynta, doorashada cuntada iyo hababka diyaargarowga, waxaa suurtogal ah in la helo walxaha iyo walxaha lagama maarmaanka u ah jirka oo dhan sanadka oo dhan, adoo adeegsanaya khudradan dhadhan fiican leh iyo nafaqo leh.